Sandals Foundation dia manome mba hamerenana amin'ny laoniny ny lalana Reef Snorkel an'i Smith
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Tiorka sy Kaicos Vaovao Vaovao » Sandals Foundation dia manome mba hamerenana amin'ny laoniny ny lalana Reef Snorkel an'i Smith
Karaiba • Kolontsaina • Hospitality Industry • fampiasam-bola • Vaovao • tompon'andraikitra • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Tiorka sy Kaicos Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Fanomezana sandaly Fototra hamerenana amin'ny laoniny ny lalan'ny snorkel reef
Ireo zava-mahavariana mahatalanjona an'ireo tontolo iainana anaty rano ao amin'ny Reef Snorkel Trail an'ny Smith dia natao hozahan'ny fiarahamonina eo an-toerana, ny mpianatra ary ny vahiny iraisam-pirenena noho ny asa fanarenana novatsian'ny Sandals Foundation.
Misokatra indray ny dian-tongotra miaraka amin'ny fanavaozana fandraisana ho fanatsarana ny fanabeazana an-dranomasina, ny fiainana. sy asa fivelomana.
Ity asa lehibe ity dia miantoka ny fiarovana ny fiainana an-dranomasina manintona, ny fiarovana ny snorkelers, ary ny fivelomana maharitra ho an'ireo izay mahazo fivelomana amin'ny fampiasana ny fantson-tsambo eo akaiky eo.
Sandals Foundation dia nandray anjara tamin'ny $ 30,000 ho an'ity ezaka ity.
Ho fahatsiarovana ny Andro eran-dranomasina eran-tany izay natao tamin'ity volana ity, ny Turks sy Caicos Reef Fund niara-niasa tamin'ny Departemantan'ny tontolo iainana sy ny harena an-dranomasina dia nanokatra tamim-pireharehana ny lalana 20 taona teo akaikin'ny morontsiraka taorian'ny fampiharana ny fanavaozana izay mitentina 30,000 XNUMX $ eo ho eo monja. avy amin'ny Sandals Foundation.
Ny asa fanarenana dia nahitana ny fanadiovana sy ny fikojakojana ny mari-pamantarana amoron-dranomasina efa misy, ny fametrahana takelaka amoron-dranomasina ary ny fantsom-boho marika manodidina ny tranokala snorkel, ny fampidirana ny tsipika filomanosana ivelan'ny faritra snorkel mba hisorohana ireo snorkeling tsy hiditra amin'ny fantson-tsambo tsy nahy, ary ny fanomezana famantarana ary torolàlana fanamarihana fiantohana hafa ho an'ny etikena haran-dranomasina.
Heidi Clarke, Tale Mpanatanteraka ao amin'ny ny Sandals Foundation faly nahita ny fisokafan'ny tranokala malaza, miaraka aminy miaraka amin'ny fahafaha-manao fampianarana maharitra sy fikarohana ara-toekarena.
"Ny famantarana vaovao an'ireo lalana dia hanampy amin'ny fanandramana fanabeazana ananan'ny mpianatra sy ny mpikambana ao amin'ny fiarahamonina eo an-toerana izay afaka mampivelatra fankasitrahana lalina sy fahatakarana ny fomba ahafahan'izy ireo manampy amin'ny fiarovana ireo harena voajanahary tsara tarehy," hoy i Clarke.
Mbola zava-dehibe kokoa ny fisokafan'ny tranonkala, hoy hatrany i Clarke, izay lohahevitra ho an'ny Andro manerantany ho an'ny ranomasimbe tamin'ity taona ity, “Mampifandray ny lanjan'ny Oseana amin'ny zavatra fantatsika tsara sy ireo teratany Karaiba - ny fiainantsika sy ny fivelom-pontsika. Ny habaka an-dranomasina dia ampahany amin'ny maha-izy antsika amin'ny maha faritra antsika ary faly tokoa izahay manana an'ity tranonkala snorkel tsara tarehy ity nosokafana miaraka amin'ny fitaovana haverina amin'ny laoniny mba tsy hiarovana ireo tontolo iainana voajanahary misy ihany fa koa ny fiainana sy fiveloman'ireo olona mizara ny loharanon-karenany. ”
Alizee Zimmermann, Tale Mpanatanteraka ao amin'ny Tahirin'i Turks sy Caicos Reef dia naneho ny fankasitrahany ny Sandal's Foundation ho an'ny asa fanarenana an'i Reef Smith izay novatsian'izy ireo vola.
“Smith's Reef dia tranokala snorkel amoron-tsiraka ankafizin'ny mponina sy ny mpitsidika. Ny ezaka famerenana amin'ny laoniny dia namorona toerana azo antoka ho an'ny snorkelers, mampitandrina azy ireo ny toerana manomboka ny fantsakan-tsambo amin'ny alàlan'ny fampidirana tsipika milomano. Ankoatr'izay, ny peratra snorkel dia manakana ny olona tsy ho any amin'ny faritra marivo sy marefo amin'ny vatoharan-dranomasina, miaro ireo vatoharanay marefo mandritra ny fotoana itondrana ilay snorkeler amin'ny fitsangatsanganana fampahalalana amin'ny alàlan'ny fametrahana marika famantarana anaty rano. Ny fambara amoron-dranomasina sy ny sarintany tsy misy rano nefa azo averina dia hahatonga an'ity ho traikefa nahafinaritra sy azo fanabeazana ary tsy hay hadinoina ho an'ny rehetra. ”
Turks & Caicos no fonenan'ny haran-dranomasina sakana fahatelo lehibe indrindra eto an-tany miaraka amin'ireo mpandeha an-tapitrisany mahery mitsidika ny nosy isan-taona hizaha ireo zava-mahatalanjona eny amin'ny habakabaka.
Niresaka nandritra ny lanonana fanokafana fohy ny Trail izay natsangana tamin'ny alàlan'ny kaoperativa fiarovana mafy, ny Tale Jeneraly ao amin'ny Beaches Turks sy Caicos, dia faly i James McAnally fa, "Rehefa manohy ny làlana miakatra ny indostrian'ny fizahan-tany ao amin'ny nosy, dia ho tonga soa ho an'ny fitsangatsanganana an-dranomasina ny sehatry ny snorkel vao misokatra. mpitady. ”
Ny mpitsidika ao amin'ny Beaches Turks sy Caicos Resorts, hoy ihany i McAnally, "dia hamporisihina hizaha ny lalan'ny snorkel amin'ny alàlan'ny fakana ny fitaovan'ny rano ao amin'ny Aqua Center ao amin'ilay toeram-pialofana ary handehandehanana kely amoron-dranomasina mankany amin'ilay tranokala izay misokatra ho an'ny besinimaro ihany koa."
Atahorana manerana ny Karaiba sy ny Atlantika tropikaly ny haran-dranomasina. Ny haran-dranomasina akaikin'ny morontsiraka dia fananana sarobidy indrindra satria mamela ny mpitsidika hanana fotoana tokana ahafahana miditra sy mianatra momba ny tontolo iainana mahatalanjona. Ny fanavaozana ny Smith's Reef Snorkel Trail dia nanomboka tamin'ny faran'ny taona 2019 saingy nisy fihemorana marobe noho ny fiandohan'ny areti-mandringana COVID-19.
Ny tetikasa dia manohy ny fiaraha-miasa maharitra eo amin'ny Turks sy Caicos Reef Fund ary ny Sandals Foundation izay nanatanteraka hetsika maro nandritra ny taona maro mba hitehirizana maharitra ny habaka an-dranomasina nosy.